Orinasa Espaniola te-hiloka amin'ny havaozina | Green Renewable
Ny orinasa Espaniola dia te-hiloka amin'ny fanavaozana azo havaozina
Ya misy firenena 11 an'ny ny tontolo iainantsika izay nahatratra ny tanjona kendrena 20% ho an'ny taona 2020, ary mety hahatratra ireo tanjona vaovao 2030 aza, toa an'i Suède, Failandy, Latvia, Aostralia ary Danemarka.
Mahagaga fa amin'ireo firenena mahafeno ny tanjona dia misongadina i Portugal mpifanila vodirindrina amintsika. Izay manana ny mtoetrandro isma, toetr'andro mitovy mahatratra 28%, raha tsy mahatratra 17% isika.
1 Tolo-kevitra eropeana vaovao
2 Orinasa Espaniola te-hidina amin'ny lamasinina azo havaozina
Tolo-kevitra eropeana vaovao
Ny parlemanta eropeana dia nanao fanoloran-tena matanjaka amin'ny angovo azo havaozina. Amin'ny tanjona efa napetraka amin'ny taona 2020. Ny zava-baovao dia manondro ny folo taona manaraka, ny taona 2030 mba hahatratraran'ny firenena eropeana fa 35% ny herin'izy ireo dia ateraky ny indostria azo havaozina.
Fandrosoana mialoha be izany, ny isa teo aloha dia 27% amin'ny daty mitovy. Saingy ho an'ny parlemantera fotsiny izao. Manantena aho fa ho tanteraka izy ireo, fa amin'izao fotoana izao ny Komisiona sy ny filankevitra eoropeanina dia mila manamarina ireo tanjona ireo na tsia.
Raha ny filazan'i José María González, talen'ny jeneralin'ny fanavaozana ny APPA dia manana izao hevitra izao izy: «Manantena izahay fa hitazona io isa io na hanakaiky izany. farafaharatsiny raha ny hevitray dia misy ny fambara mazava be fa mila miloka amin'ny fanavaozana azo atao ».
Mampalahelo fa tsy nahatratra ny 17% amin'ny angovo rehetra ateraky ny fanavaozana. Taorian'ny taona maro tsy nametahana MW na dia herinaratra vaovao azo havaozina aza noho ny didin'ny PP, tamin'ny taon-dasa dia nanao varotra varotra 3 tany Espana, fantatsika fa noho ny tsindry avy amin'ny Vondrona eropeana.
Amin'ireto lavanty ireto dia mila mahatratra ny 20% angatahan'ny Vondrona eropeana isika ao anatin'ny roa taona.
Any Chine dia misy lalana misy panneaux solaires. Iray amin'ireo ohatra fa efa miloka mafy amin'ny angovo azo havaozina ireo hery lehibe. Tsotra ny fanazavana: nahena be ny vidiny.
Ny revolisiona nitranga tato anatin'ny taona vitsivitsy dia ny fihenan'ny vidim-piainana, noho ny fiofanan'ny fianarana, izay efa nahena tokoa efa ny safidy lehibe indrindra amin'ny fananganana foibe famokarana angovo vaovao any amin'ny firenena rehetra eto amin'izao tontolo izao dia angovo azo havaozina izy ity ”, manome toky Heikki Willstedt, talen'ny Politikan'ny angovo sy ny fiovan'ny toetrandro PREPA.
Orinasa Espaniola te-hidina amin'ny lamasinina azo havaozina
Raha ny marina dia orinasa maro no te hiloka amin'ny vola azo havaozina, na banky (Bankia na CaixaBank), orinasam-pananganana, fitantanan-draharaham-panjakana, mpaninjara toa an'i El Corte Ingles, ankoatry ny hafa.
Maka ohatra an'i Bankia, Nexus Energy hamatsy herinaratra azo havaozina 100% ho an'i Bankia, mamatsy teboka famatsiana 2.398, eo anelanelan'ny trano foibe sy sampana, miaraka amin'ny fanjifàna mihoatra ny 87 GWh isan-taona. Nexus Energía dia nanolotra iray amin'ireo tolotra mifaninana indrindra amin'ny sehatra ara-toekarena sy ara-teknika, noho ireo fitaovana fanatsarana sy fitantanana marobe.
Ny lafiny famaritana dia ny asa fanatsarana natao ho an'ny foibe sy sampana Bankia rehetra, izay midika ho zava-dehibe tahiry any amin'ny banky. Ankoatr'izay, ny fitaovana dia nanao fandalinana feno isaky ny teboka famatsiana mba hahitana ny tena filany angovo herinaratra.
Ohatra iray hafa koa ny CaixaBank, ity orinasa ity dia nanampy tamin'ny fananganana orinasa biogassation biomassa tao Viñales (Chile), ho lalana iray offset ny famoahana CO₂ nalaina tamin'ny asany nandritra ny taona lasa. Ny fikajiana ny dian-tongony karbaona sy ireo tetik'asa manohana azy izay manampy amin'ny fampandehanana izany dia iray amin'ireo hetsika manatanteraka ny fanoloran-tenan'i CaixaBank hitandro ny tontolo iainana sy hiady amin'ny fiovan'ny toetrandro.
Raha ny marina, any Espana ireo orinasam-pamokarana azo havaozina dia nametraka tanjona feno faniriana sy be fanantenana. Mahaiza mizaka tena amin'ny 2040 amin'ny famokarana herinaratra 100% amin'ny fomba azo havaozina. Ary amin'ny 2050 mahatratra decarbonization feno.
Amin'izao fotoana izao dia toa nofinofy kokoa noho ny fahafaha-manao izany, saingy tsy hisy izany raha tsy misy ny finiavana politika. Amin'ity fomba ity ihany tsy misy solika fôsily hampiasaina ao anatin'ny 3 taona.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fanavaozana maintso » Angovo azo havaozina » Ny orinasa Espaniola dia te-hiloka amin'ny fanavaozana azo havaozina